Tom Howard - Kura yako Cannabis Bhizinesi neCannabis Gweta
Nezve Tom - Gweta Rakanakisisa reCannabis
Mumwe akaberekerwa kuPeoria, Illinois, Thomas Howard akapedza kudzidza kubva kuIllinois Wesleyan University uye Marquette University Law School.
Mukufamba kwake, akawana mibairo yemamirioni akawanda, akasimbisa mutongo, uye akachengetedza kodzero dzemutengi wake apo achiraira nzira yekudzikisa nguva uye mutengo wakawanikwa mukusimbisa zvibvumirano kuburikidza nerechimhosva.
Anoshanda paIllinois State Bar Association's Commerce Banking, Immigration uye Cannabis Chikamu C Council uye akapiwa zvese sechi Kukura Nyeredzi naSuper Magweta uye seMutemo Inomirira Gweta rinotungamira Lawyers kubvira 2015.
Muitiro yake yese, anga ari muzvinabhizimusi akatarisana nekugadzira kukosha.
Muna 2013, Tom aida kuripira vanhu nekutenga a novel raakanyora muna 2010 pamitemo ye mbanje uye yakauya nepfungwa yekushandisa chikumbiro chekudzivirira zvematongerwo enyika. Iye nemumwe mushambadzi akagadzira LLC ndokuvaka iyo Callitics
Akatanga kudzidzisa iye kunyora uye sei software uye internet inoshanda. Akashanda uye akashanda pamwe nemapoka pasi rose, achigadzira network yevakagadzirisheni vanovimbika yaanogona kuvimba navo mukugadzirisheni neinjiniya tsika mhinduro pamapuratifomu, mukuwedzera pakukosha kwekushambadzira uye kugadzira zvinhu kumabhizinesi ese ane hupo hwepamhepo zvinoda.
Mushure mekubiridzira nekudzidza iyo software uye webhu bhizinesi kwemakore akati wandei, Tom Howard akagadzira kambani ye tech inonzi Stumari kuti ibatsire kugadzira zvinhu, senge ino saiti, uye imwe software inovaka.
Kutama Kunze Software
Muchirimo cha 2016, Tom Howard aida kutanga kushandisa software yake kuziva kwake kwemutemo tsika. An H-1B vhiza application yakasvika padhesiki rake tafura uye aiziva kuti inogona kuve yakanyorwa nekuda kwemhando yedata uye huwandu hwemashandisirwo ayo anoda kumira.
Akaita kumwe kutsanangura kuti awone ukuru hwemusika uye kudikanwa kwezvinogadziriswa zvewebhu kurongedza maitiro emabhizinesi akatarisana nawo apo achiedza kuhaya tarenda repamberi rekunyanzvi.
Iine data iri paruoko, Tom Howard akadzokera kuzvikwata zvaakanga avaka naStumari ndokutanga kugadzira mhinduro nyowani yezvinetso zvekupinda nekubuda kwevanhu. Kwete mavisa chete anofanirwa kuenderana nemitemo inoshanduka kubva kuCustoms and Immigrations Services uye Mutungamiriri wazvino, asi chinzvimbo chemuridzi weVisa chinofanirwa kuve chinotarisirwa kuti chigare chiri mukuteerera.
Iko kusimudzira kuri kuenderera kusvika nanhasi uye kubatsira vanhu kuziva avo eAmerican Dreams.
Shanyira maVisa eBasa
Canannis Viwanda Gweta
Munguva yake yekusarudzika mumakore ake ekutanga ekutevedzera mutemo, Tom Howard akaongorora nhoroondo nenhoroondo yematare zvine chekuita nemutemo wenyika dzenyika mbanje. Akaburitsa zino zvichikonzerwa nekutsvagurudza kwaakaita pseudonym, Hoam Rogh. Sezvo zvaakange abuditsa mamwe mabhuku maviri aakanyora munguva yake yekusara kuchikoro chemutemo.
Kubva ipapo, Tom Howard akawedzera kutsvagisa kunzvimbo dzakaoma kunzwisisa dzemutemo wehurumende uye akatanga kuburitsa nekutaura pane dzakasiyana siyana zvine chekuita neiri kubuda indasitiri ye cannabis indasitiri. Semumiriri muPeoria, Illinois, maitiro ake mune cannabis aive mashoma kusvika muna 2018, paakatanga YouTube chiteshi pairi uye nyika yakatanga kufora yakananga kumutemo kweAdult Use.
Unogona kuwana kopi rebhuku raakanyora, asi rakaburitswa pasi pezita rekunyadzisa, paAmazon.
Pakasvika 2018, Tom Howard akange afanopfuura ekushambadzira kwemabhizimusi ekushambadzira zana uye akaona yakakwana kubhengi kubvumidza maitiro ayo zvakadzama.
Akagara zvakare pamusoro pezvakaitika mubazi rezvemitemo uye akatanga kuona kuwirirana kwehunyanzvi hwe tech uye bhanga litigation hunyanzvi sets.
Nekuda kweizvozvo, akatanga Collateral Base sosi yevashandi vekutengesa mabhangi uye nekuratidza mamiriro anogara achiitika ekuchengetedzwa kwekutengeserana uye emari masangano emutemo.
Tom Howard anosanganisa software yake uye hunyanzvi hwepamutemo kuti ape fizi mubhadharo wekutengesa bhangi, uye shandisa iyo data kubva muitiro kuti uenderere mberi nekugadzirisa uye kunatsa sevhisi inopa kune yake yenharaunda yebhangi vatengi.
Cannabis Gweta paSocial Media
Tom Howard anoshanda nesimba pakutsvakurudza nekushandira iyo cannabis indasitiri zviri pamutemo zvinodiwa kubvira 2010. Akaburitsa kakawanda nezvematambudziko akasara anotarisana neindasitiri uye akamiririra zvemari uye cannabis masangano muindasitiri nyowani uye yakaoma. Muna 2018, Tom Howard akatanga a YouTube Channel uye akatanga iyi webhusaiti kuwedzera kugona kwake kwekubatana pamwe nekushandira iyo cannabis indasitiri.
Tora Iri Bhuku
Akaita kumwe kutsanangura kuti awone saizi yemusika uye kudiwa kwewebhu-based mhinduro yekugadzirisa maitiro emabhizinesi anotarisana nawo apo achiedza kuhaya tekinoroji yepamusoro yehunyanzvi hwehunyanzvi.
Iine data iri paruoko, Tom Howard akadzokera kuzvikwata zvaakanga avaka naStumari ndokutanga kugadzira mhinduro nyowani yezvinetso zvekupinda nekubuda kwevanhu. Kwete mavhiza chete anofanirwa kuenderana nemitemo inoshanduka kubva kuCustoms and Immigrations Services uye nePresident yazvino, asi chinzvimbo chemuridzi weVisa chinofanirwa kuve chinotarisirwa kuti chigare chiri mukuteerera.